China Cat Bag Portable Pet Backpack Dog Cat Large Space Capsule Walking Cat Bag mitondra Schoolbag orinasa sy mpanamboatra | MiaSein
Anaran'ny vokatra: Kitapo saka azo entina kitapom-batsy alika saka saka lehibe habakabaka Capsule mandeha kitapo saka mitondra kitapo
Description: Famolavolana habe lehibe telo-habe, mety amin'ny saka sy alika lehibe. Ny varavarankely an-kalamanjana lehibe + lavaka misy rivotra eo an-tampony dia manome traikefa mamelombelona ny biby fiompy amin'ny fahavaratra. Volavola azo ampiharina azo zahana, fitehirizana toerana ary mora entina. Drafitra fanoherana avo roa heny, zipper manohitra fanokafana + fehin-kibo fanamafisana Ny famolavolana fanitsiana maromaro dia mahatonga azy io ho mendrika sy miorim-paka ao aoriana, ary ny fehin-tsoroka ambony dia azo ahitsy, manamora ny fitondrana azy. Famolavolana manerantany amin'ny vanim-potoana efatra, fampiasana maodely roa ary fampiasana maro hafa an'ny shutter roller. Teboka adin-tsaina dimy, teboka adin-tsaina dimy mifandanja amin'ny andilana, soroka, tratra, lamosina ary vodiny, mampihena ny tsindry fiterahana. Akorandriaka vita amin'ny plastika vita pirinty, azafady ny aizina, hazavana eo noho eo, avelao ny saka hijery an'izao tontolo izao ary hahatsapa ho azo antoka kokoa. Ny habaka lehibe dia mamela ny biby fiompy hihodina sy ho afaka.
Fomba fametrahana: ampifanaraho amin'ny fonosana afovoany ny lohan'ny zipper amin'ny sisiny mangarahara ary sintomy izy. Rehefa avy nisintona ny lafiny iray dia apetaho amin'ny fomba mitovy ihany ny lafiny iray. Ataovy ondana, na asio diaper.
Anaran'ny singa ： Fitaovana sy biby fiompy
Style: mavokely, volondavenona, mavo
Item: miralenta: Universal
Haben'ny (amin'ny cm): 36 * 36 * 40cm
Fitaovana: Nylon EVA
Fomba fitehirizana: Tehirizo amin'ny toerana mangatsiaka sy maina
Mariho azafady: Ity vokatra ity dia noforonina sy novokarin'ny orinay manokana. Tsy manohana ny fanaingoana azy ity vokatra ity. Fandrefesana amin'ny tanana, misy lesoka maromaro, azafady raiso ny tena zavatra ho toy ny fenitra. Raha tsy afa-po amin'ny vokatra ianao dia mifandraisa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Previous: Akanjo alika alika kely vavy Teddy Bichon Pomeranian Schnauzer Kavina farihy efatra sy tongotra palitao matevina kely
Manaraka: Fanafody fitsaboana biby mampahery manome sakafo fanafody ho an'ny alika sy saka dia azo omena takelaka misy kalsioma ho famonoana biby fiompy
Pet Hair Knot Comb Comb Comb Comb Dog Big Row Comb St ...
Lion Little Ears Wig Dog Hat Pet Wig nivadika ho ...
Akanjo an'ny alika lehibe amin'ny fararano sy akanjo ririnina
Akanjo alika lehibe antonony lehibe alika mafana manafana an ...